Hore 5 Diiwangalinta ugu Dallacsan tartanka ee Masters
Waxaa jira waxyaabo badan oo cajiib ah oo ka mid ah qoraallada Masters ee tartanka . Hey, dhamaantood waa kuwo cajiib ah - waa sababta aan u qorno diiwaannada! Laakiin waa kuwee diiwaanada tartanka ee Masters ee ugu sareeya? Waa kuwan xulashadeena ugu sareysa Top 5 ee ugu qatarsan taariikhda Masters:
Arnold Palmer 50 Sano oo Sannadle ah ayuu ciyaaray
Arnold Palmer ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay 2004 Masters ka dib 50 kulan oo isku xigta. David Cannon / Getty Images
Arnold Palmer wuxuu ciyaaray Masters shan iyo konton sano oo isku xiga. Dhibaato ma lahan, cuduro ma gooyey garabkiisa. Dabcan, wuxuu u qalmaa inuu sannad walba ciyaaro isagoo udubdhexaad u ah horyaalka (wuxuu ku guuleystay afar jeer). Laakiin dhab ahaantii wuu kufadhiyay sanad walba. Gary Player ayaa ka ciyaaray 52 Masters Masters, laakiin waxa uu "kaliya" yahay 36 oo isku xigta; Jack Nicklaus wuxuu ciyaaray 45 wadar, laakiin "kaliya" 40 oo isku xigta.
Doug Ford wuxuu ku guuleystey Palmer qaybtaas, iyadoo 46 toos ah uu ku bilowday.
Palmer marka hore wuxuu ciyaaray Masters 1955, markii uu ahaa 25 jir, Dwight Eisenhower wuxuu ahaa madaxweyne. Wuxuu ugu dambeyntii u ciyaaray The Masters sanadkii 2004, markii Palmer uu ahaa 75 jir, George W. Bush wuxuu ahaa madaxweyne. John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George HW Bush iyo Bill Clinton ayaa sidoo kale yimid isla markaana ah madaxwaynaha maraykanka; Palmer ayaa ku sii jeeday magaalada Augusta ee dalka Afraad kasta, isaga oo aan ka maqnayn tartanka ilaa uu si iskaa ah ugala baxo ka dib markii uu 2004 Masters.
Xidhiidhka: Arnold Palmer wuxuu ku dhammaaday Masters
Jack Nicklaus '12 Top 3 Finishes
Jack Nicklaus wuxuu kor u qaadayaa boonadiisa oo ah meel qallafsan oo ah dooxada 17aad ee wareega ugu dambeeya 1986 Masters. David Cannon / Getty Images
Augusta Dhibaatooyinka Qaranka ma aha run ahaantii heysta rikoodhka ugu sareeya 3, laakiin waxaan ognahay in Nicklaus uu leeyahay xirfadaha ugu sareeya Top 3s: "Masters" ayaa heysta rikoorkii loogu talagalay Top 5, iyo Nicklaus wuxuu leeyahay rikoorkaas 15; kooxda kaalinta labaad ku jirta ayaa leh 10 dhibcood oo ugu sareysa. Sidaa darteed Nicklaus ayaa ku dhameysatay Top 3 marar badan oo ka mid ah qofkii kale ee ku dhameystay Top 5:
Nicklaus wuxuu ku guuleystay lix jeer, rikoodh;
Wuxuu dhammeeyey afartii jeer ee la soo dhaafay, rikoodh uu ku biiray;
Waxaana uu ku daray labada xul seddex meelood oo seddexaad oo isku xigta si qiyaas fiican loo qaato.
Nicklaus wuxuu heystaa rikoorkii tartanka ugu sareeya 3-da ugu sareeya, ugu sareeya 5-ta mid ah, ugu sareeya 10-ka sareeya iyo ugu sareeya 25-ka.
Haa, Nicklaus wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro Masters.
Ku saabsan : Jack Nicklaus 'wuxuu ku dhammeeyaa Masters
Tiger Woods '12-Kufan ​​Oo Gaaray Margin
Markii Woods uu dhigay rikoorkii kor ku xusanaa isagoo ah kii ugu da'da yaraa, wuxuu ku sameeyay qaab ciyaareed kale oo rikoor ah: wuxuu ku guuleystay 12 strokes. Waxay ahayd qaabka ugu wanaagsan ee taariikhda tartanka, waxaana dhacay 1997 Masters .
Woods ayaa ka fiicneyd rikoodhkii hore (9-stroke oo ay Nicklaus ku guuleysatay 1965-kii) saddex rikoodh. Wuxuu ku sameeyay wareega 70-66-65-69 si uu u soo tuuro 270 (sidoo kale rikoorka tartanka).
Maxaa ka dhigaya in guushii guuleystay ee Woods uu yahay mid xaqiiqo ah in uu dhaliyay 40 gool sagaalkiisii ​​sagaalaad ee tartankan. Tiger ayaa u muuqday in Tiger uu ka maqnaan doono go'aanka uu ku guuleysanayo tartanka, inta badanna way ka cararaan.
Jack Burke Jr oo ah 8-Stroke Comeback Win
Jackie Burke wuxuu ahaa siddeed taako oo ka danbeeyay hogaamiyaha saddexaad ee kala ah Ken Venturi iyadoo wareega ugu danbeeya ee 1956 Masters bilaabmay. Venturi ayaa garoonka ku soo qaaday afar darbi - waxay u muuqatay in hiwaayad uu ku socdo si uu u guuleysto.
Burke ayaa hoos u dhacay markii uu bilowday wareegga afaraad, isagoo 9 dhibcood ka hoos maray Venturi hal dhibic. Laakiin maxay u qaadataa si ay dib ugu soo noqoto? Wareeg aad u weyn oo kugu soo kordhay oo aad u weyn, hogaamiye, ama labada dhinacba.
Venturi ayaa ku guuldareysatay inay ka faa'iideystaan ​​dhibaatooyinka Venturi, sidoo kale wuxuu ka faa'iideystay xaqiiqda ah in mid ka mid ah golfers-isaga u dhexeeya isaga iyo hogaamiyaha awood u yeelaan inay ku dhejiyaan qarashkooda.
Markay dhammaatay, Burke waxay guulaysatay guushii ugu weyneyd ee soo gaarta taariikhda Masters.
(Tie) Jack Nicklaus iyo Tiger Woods, ugu da'da yar iyo ugu sarreysa Champions League
Jack Nicklaus wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee Masters markii uu ku guuleystay 1986 tartanka isagoo da'diisu tahay 46 sano 2 bilood 23 maalmood. Sanadkii 1997, Tiger Woods wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa markii uu ku guuleysto da'da 21 sano, 3 bilood 14 maalmood.
Woods wuxuu ku dhawaad ​​laba sano ka yaraa ninka rikoorkiisa jabiyay, Seve Ballesteros (oo qudhiisu jabiyay rikoorkii Nicklaus). Woods wuxuu ahaa da'yarka kaliya ee da'diisu ka yar tahay 23 sano si uu u guuleysto Masters ilaa 21 jirka Jordan Spieth ayaa sameeyay liis dheer laba sanno 2015 (Spieth wuxuu ahaa lix bilood ka weyn Tiger 1997).
Nicklaus wuxuu ahaa afar sano jir ka weyn ninka rikoorkiisa jabiyay, Gary Player . Ma uusan badin labo sanno, waxay ahayd lix sano tan iyo guushii ugu danbeysay ee uu ku guuleystay iyo 11 sano tan iyo markii ugu danbeysay ee uu ku guuleysto. Waxay ahayd koobkii lixaad ee Masters ee Nicklaus.
2016 US Open: Johnson ayaa ku guuleysta in ay guuleystaan
Liiska gaaban ee ku guuleystayaasha bidixda ee PGA Tour
1973 US Open: 63 Sababta Johnny Miller Won
Heerka sare ee PGA
Inta badan tartanka Masters ayaa bilaabanaya
Maxay ahayd Maxkamad Cusub Roman?
Waqtiga Qeexitaanka ee kiimikada
Darajada Dambe ee Carruurta Dembiilay: Dambi ama Miyuu Tareen?
Talooyin ku Saabsan Kordhinta Ficilada Faransiiska
Xaqiiqooyinka Bohrium - Element 107 ama Bh
Sidee loo kobciyaa Kalamoyinka Hulalka Alumiyoolka Alum
Luqadaha Franklin D. Roosevelt
Qodobada Xusuusinta Xisbiyada ee Fasalada Hoose
Farqiga udhexeeya Tallaabada iyo Fikradaha Xaqiiqda
Emilio Jacinto oo ka mid ah Filibiin
Kobcin Your Your Own Mineral Mineral Crystal Specimen
Andrew Jackson Calaamadaha Waraaqaha iyo Midabaynta Bogagga
La xiriirka Ruuxa Dunida
Sida Loo Hirgeliyo Habraaca Miisaaniyadda Dawlada Dhexe
Xaqiiqda saxda ah iyo khaladka ah si aad u sawirto kubadda Cue
Dhaqannada loogu talagalay Bilaha Elul
The Legend of Lucretia ee Roman History
Leo Moon (Transit) - Niyadda iyo Hawlaha
Hel Qeexitaanka Ubuntu, Erayga Nguni oo leh dhowr Muuqaal
Erayada kala duwan ee xilliga "Cut" ee Golf
Gen. Black Jack Pershing iyo Argagixisada Muslimiinta
Hirgalinta Momentum ee Volleyball